एक वृद्ध यसरी ठगिए : ‘के गर्नु पढेको थिइनँ, धम्क्याएपछि ल्याप्चे लगाइदिएँ’
Sun, Jun 24, 2018 | 13:18:09 NST
वैशाख ८ – साउदी पुगेका श्रीमानको चार महिना पछि फोन आउँदा फुरुङ्ग हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीको गौरीशंकर-९ की राजकुमारी महतो ।
फोन आउँदा खुशी भएकी राजकुमारी श्रीमानको कुरा सुनेपछि भने तनाबमा पर्नुभयो । श्रीमानले चार महिना काम गर्दा पनि कम्पनीले तलब नदिएको अनि सधैँ खान पनि नपाएका कुरा भन्नुभयो फोनमा । श्रीमानले उहाँसँग आफूलाई साउदीबाट तत्काल निकाल्न पनि आग्रह गरेपछि उहाँलाई तनाब भएको हो ।
यहाबाट सुपरमार्केट भनेर लगेपछि त्यहाँ क्लिनरको काममा लगाएकाले आफूले काम गर्न नसकेको भन्दै श्रीमान् तत्काल नेपाल फर्काउन भनेपछि राजकुमारीले गर्ने भन्ने पनि सोच्न सक्नुभएन् । त्यसैले उहाँ भोली पल्टै हरिवनमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा पुग्नुभयो । केन्द्रले राजकुमारीलाई काठमाडौंमा रहेको पिपुल फोरममा जान सल्लाह दियो ।
त्यही सल्लाहमा उहाँले ससुरा रामसिकिल महतोलाई काठमाडौं पठाउनुभयो । काठमाडौं आएका रामसिकिलले पिपुल फोरमको सहयोगमा वैदेशिक रोजगार विभागमा भनेको काम र तलब दिलाइदिन माग गर्दै काठमाडौंको नाइल ओभरसिज प्रा.लि. म्यानपावर बिरुद्ध उजुरी दिनुभयो ।
उजुरी दिएको तीन महिनापछि म्यानपावर आफैंले राजकुमारीलाई फोन गरेर ससुरालाई चार दिनभित्र कार्यालयमा पठाइदिनु भन्यो । ‘मैले अब उहाँलाई घर फर्काउने कुरा गर्न बोलाएको होला भन्ने सोचेर ससुरा बुवालाई छिमेकीसँग पैसा मागेर काठमाडौं पठाएँ’ राजकुमारीले भन्नुभयो ।
तर छोराको उद्धार हुने आशम आएका रामसिकिललाई म्यानपावरका सञ्चालकले छोरा फर्काउने भन्दा पनि हामी बिरुद्ध मुद्दा हाल्ने भन्दै गाली गरे । त्यति मात्रै होइन मुद्दा फिर्ता लिने कागजमा सही गरे मात्रै तेरो छोरा नेपाल आउँछ भन्दै धम्क्याए पनि । ‘के गर्नु मैले लेखपढ गरेको थिइन, त्यसैले छोरा आउँछ भनेपछि कागजमा ल्याप्चे लगाइदिएँ’ रामसिकिल भन्नुहुन्छ ।
कागजमा सही गरिसकेपछि उहाँलाई म्यानपावरले तीन महिनामा छोरो फकाईदिने भन्दै त्यतिञ्जेलका लागि घर खर्च भन्दै २० हजार रुपैयाँ पनि दियो । उहाँ त्यही २० हजार र कागज बोकेर घर फर्किनुभयो ।
तर घर पुगेर अरुले कागज हेरेपछि मात्रै म्यानपावरले आफू माथि पर्ने गरि कागजमा ल्याप्चे हान्न लगाएको थाहा पाउनुभयो उहाँले । ‘अरुले किन यस्तो कागजमा नबुझी ल्याप्चेको हानेको भनेपछि मात्रै मात्रै मैले त्यो कागज त म्यानपावरले आफू उम्किने गरी बनाएको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ’ ६० वर्षका रामसिकिलले भन्नुभयो ।
म्यानपावरले फसाउन खोजेपछि राजकुमारी श्रीमानलाई विदेश पठाउने एजेण्टको मोहित लामाकोमा पुग्नुभयो । उनी आफ्नै गाउँका थिए ।
राजकुमारीले विदेश पठाउँदा ८० हजार रुपैयाँ लिए पनि श्रीमानले उहाँको भनेको काम र तलब नपाएको भन्दै फर्काइदिन आग्रह गर्नुभयो तर एजेण्टले पनि तिम्रो ससुराले म्यानपावरमा गएर सहमति गरेर कागजमा ल्याप्चे लाएर आएको भन्दै केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए ।
अहिले त न म्यानपावरले फोन उठाउँछ न त एजेण्टले नै सहयोग गर्छन । म्यानपावरले ८० हजार रुपैयाँ लिएपनि १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद दिएकाले उहाँसँग सहयोग माग्ने आधार पनि छैन ।
‘म्यानपावरले मान्छेलाई यसरी झुक्याउँछ भन्ने थाहा नै भएन, आफू फस्ने भएपछि कागजमा झुक्कायर सहि छाप गरायो’ राजकुमारी भन्नुुहुन्छ, ‘झुटो आशा देखाएर मुद्दा पनि फिर्ता गर्न लगायो । अहिले त उहाँ पनि लापता हुनुभयो अब के गर्ने ?’ राजकुमारी सोध्नुहुन्छ यस्तो म्यानपावरलाई सरकारले कारवाही गर्न सक्दैन ?
उद्धारका लागि गरिरहेको पहल सफल नभइ रहेका बेला गएको मंसिर १२ गतेदेखि श्रीमान सम्पर्क विहीन भएपछि भने उहाँलाई झनै तनाव भएको छ । ‘१२ गते अघिसम्म जति सक्दो छिटो यहाँबाट निकाल भन्नुहुन्थ्यो अहिले त फोन गर्न नै छोड्नुभयो, हामीले फोन गर्दा लाग्दैन’ राजकुमारी भन्नुहुन्छ ।
कमाउन गएका श्रीमान समस्यमा परेपछि घर व्यावहार चलाउन समस्या भएको छ राजकुमारीलाई । उहाँ अहिले घरका लागि चाहिने पैसा ऋण गरेर चलाउँदै हुनुहुन्छ । श्रीमान गएदेखि अहिलेसम्म एक लाख रुपैयाँ ऋण लागिसकेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
धेरैतिरको प्रयास पनि सफल नभएपछि अब राजकुमारीको आशा सरकारमा गएर अड्किएको छ । सरकारले चाहे आफ्नो श्रीमानको उद्धार हुने उहाँको विश्वास छ ।